कसरी तयार भयो, प्रधानन्यायाधीश बिरुद्धको महाअभियोग ? – HamroSamrachana
कसरी तयार भयो, प्रधानन्यायाधीश बिरुद्धको महाअभियोग ?
हाम्रो संरचना । १८ बैशाख २०७४, सोमबार १०:४२
जयबहादुर चन्द र नवराज सिलवालमध्ये कसलाई आइजिपी बनाउने भन्नेमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिबीच सुरुदेखि खटपट थियो । सिलवाललाई आइजिपी बनाउनुपर्ने निधिको निरन्तर अडानबीच देउवाले आफ्नै गृहक्षेत्रका चन्दको पक्षमा ‘अन्तिम निर्णय’ दिए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मूख्य सत्ता साझेदारको सिफारिश सदर गर्ने नै भए, गृहमन्त्रीको क्षेत्राधिकार कुण्ठित भयो ।
सर्वोच्च अदालतले आइजिपी नियुक्तिमा योग्यता र वरियता मिचिएको भन्दै चन्दको नियुक्ति बदर गरिदियो । देउवा र प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीबीच खटपट त्यही घटनाबाट सुरु हुन्छ । देउवाले प्रधानमन्त्री दाहालसँग असन्तुष्टि पोख्दै कार्कीले क्षेत्राधिकार नाघेर राजनीतिक निर्णयमा अंकुश लगाएकाले आफ्नो सीमामा बस्नेगरी ‘सम्झाइदिन’ आग्रह गरेका थिए ।
‘मैले नै उनलाई (कार्कीलाई) विराटनगरको ल फर्मबाट काठमाडौं ल्याएको होइन ? अनि तपाईंले न्यायाधीशमा अघि बढाएको होइन ? त्यत्तिकै बिर्सने ?’ देउवाले दाहाललाई भनेको उद्धृत गर्दै उक्त भेटमा सहभागी माओवादी केन्द्रका एक नेताले भने, ‘तपार्इंले बोलाएर एकपल्ट सम्झाउनुपर्‍यो । नत्र म आफ्नो कदम चाल्छु ।’
कार्कीको विषयलाई लिएर देउवा क्रुद्ध भएको बुझेपछि दाहालले एक साताअघि आफ्ना विश्वासपात्र नेता वर्षमान पुनलाई कार्कीसँग कुराकानी गर्न पठाएका थिए । पुनको आशय बुझेपछि पूरै कुरा नसुनी कार्कीले फर्काएकी थिइन् ।
दोस्रोपल्ट फेरि आइतबार बिहान गएका पुनलाई कार्कीले आधा घण्टासम्म कुराएको उच्च स्रोतले बतायो । पुन उनका पति दुर्गा सुवेदीलाई भेटेर खाली हात फर्के । कार्कीले यसबारे आफू कसैको पनि कुुरा नसुन्ने जवाफ दिएकी थिइन् । नेता पुनले कान्तिपुरसँग कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्रीको आग्रहमा आफू भेट्न गएको खुलाए, तर यसबारे थप बताउन मानेनन् ।
माओवादी केन्द्रका अर्का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने कांग्रेस र आफ्नो नेतृत्वले गरेको निर्णयबारे ‘आफू बेखबर रहेको’ अर्थपूर्ण प्रष्टीकरण दिए । ‘यस्तो निर्णय भएछ, कसरी भयो भन्नेबारे पार्टीलाई जानकारी छैन,’ उनले भने, ‘भोलि बैठक बसेर यसबारे विस्तारमा थाहा होला ।’ माओवादी केन्द्रले बिहान ८ बजे बालुवाटारमा हेडक्वार्टरको आकस्मिक बैठक डाकेको छ ।
कार्की महाभियोग प्रकरणबाट राज्यका सबै अंगले ‘आ–आफ्नो सीमा चिन्न सक्नुपर्ने’ सत्ता घटक नेताहरुको चेतावनीमूलक सन्देश छ । तर विधिको सर्वोच्चता मिच्दै राजनीतिक दलहरु स्वेच्छाचारी बन्ने खतरा बढेको भन्दै सर्वसाधारणले दिनभर आक्रोश र चिन्ता जाहेर गरे ।